Wararka Maanta: Jimco, Dec 7 , 2018-Degmada Taleex oo muddo 10 sano ah kaddib leysku furay
Jimco, December, 07, 2018 (HOL) – Magaalada Taleex oo ku dhowaan toban sano lahayd xad cagaaran oo aan laysu gudbin ayaa maanta si nuuxda loo soo afjaray, kadib wadahadal todobaadyadii la soo dhaafay oo ay madax-dhaqameed kala duwan ka qayb qaateen.
Socod balaadhan oo aan loo kala hadhin oo madax-dhaqameedku horkacayaan oo uu hormuud ka ahaa Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa dhexmaray wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi dhexmaray.
"Magaalada Taleex maanta waxaad moodaa maalin ciid ah iyadoo usha cirka loo tuuraa aanay dhulka ku dhacayn, waxaan ku odhan karaa maanta ma jiro qof guri ku jira, xitaa caruurtii, umulihii iyo kuwii aan soconkarayn waa laysu soo baxay, farxad maanta ka weyn oo Taleex soo martayna ma jirto ayaan ku odhan karaa" sidaa waxaa HOL u sheegay Axmed Maxamed Daadey.
Farxada magaalada hadhaysay ayaa sababteeda ay qaateen madax-dhaqameed ka kala yimi Puntland, Jubbaland iyo degaano kale, walow ay inta badan qaar ka mid ah waxgaradka degmada Taleex oo Garaad Saleebaan Garaad Maxamed ay mudo laba bilood ka badan dhiraandhirinayeen sidii colaada toban jirka ku dhow soo afjaraan.
Maalinta beri ah ayaa la filayaa in xaflad balaadhan lagu qabto Berde-khaatumo oo ku yaala koonfurta Taleex, iyadoo ay halkaasi ku sii qulqulayaan wufuud kala duwan oo dalka gudihiisa ka imaanaya sidii ay marag uga noqdaan heshiiskaas.
Dhamaadkii sanadkii 2011kii ayay colaada labada daamood ee magaalada Taleex ay halkaasi ka hoortay taas oo kala goysey qoysas iyo qaraabo aan kala maarmin kuwaas oo maanta ay u suuragashay in ay midoobaan, iyadoo illaa todoba jeer oo hawshaas laysku deyey ay guuldaraysteen.
Si kastaba ha ahaatee maanta waxaa Taleex ka curatay hogol farxadeed waxaana dhamaan bulshadu ay ku niyad sanyihiin dhamaadka sanadihii madoobaa.
laascaanood G Sool